2022 ခုနှစ်တွင် စမ်းသပ်ရန် အကောင်းဆုံး CBD ခေါင်းစဉ် - shopgiejo.com
2022 တွင် စမ်းသပ်ရန် အကောင်းဆုံး CBD Topical
လိမ်းဆေး CBD ထုတ်ကုန်များသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဆွဲဆောင်မှုအမြောက်အမြားရရှိခဲ့ပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အဓိကဖြစ်လာခဲ့သည်။
စစ်တမ်းတွေအရ CBD ရဲ့ ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေက မင်းရဲ့ ဝက်ခြံတွေကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပြီး psoriasis နဲ့ နှင်းခူလိုမျိုး တခြားအရေပြားဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကိုလည်း ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ CBD သည် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောင်ရမ်းမှုအပေါ် ကုထုံးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟု လူသိများသည်။ ထို့အပြင် CBD သည် အိုမင်းရင့်ရော်မှု လက္ခဏာများကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကို ဟန်ချက်ညီစေကာ အသားအရေကို နုပျိုစေပါသည်။
CBD လိမ်းဆေးထုတ်ကုန်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
လိမ်းဆေး CBD ထုတ်ကုန်များသည် CBD စားသုံးခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ cannabinoid receptors များသည် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရှိကြပြီး နာကျင်မှုခံစားမှု၊ ကိုယ်ခံအားလုပ်ဆောင်ချက်၊ စိတ်ခံစားချက်၊ အစာစားချင်စိတ်နှင့် အခြားအရာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
လိမ်းခြယ်သောအခါ၊ CBD သည် အရေပြားပေါ်ရှိ cannabinoid receptors များနှင့် ဓါတ်ပြုပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဤထုတ်ကုန်များသည် သွေးကြောထဲသို့မ၀င်ဘဲ နာကျင်မှု သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေသည်။ ထို့အပြင်၊ အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များသည် ယာယီသက်သာရာရစေရုံသာမက ကြာရှည်အသုံးပြုပြီးနောက် ပြဿနာကို အမှန်တကယ် ပြေပျောက်စေနိုင်သည်။
2022 ခုနှစ်အတွက် ထိပ်တန်း CBD ထုတ်ကုန်များ
CBD ခေါင်းစဉ်များ အနည်းငယ်နာမည်ရရန်အတွက် ဆား၊ ဗာလစံဆီ၊ ခရင်မ်နှင့် အဆီများ ပါဝင်သည်။ များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ထုတ်ယူမှုများနှင့် ဗီတာမင်များကဲ့သို့သော အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထားသည်။ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ CBD ခေါင်းစဉ်များ စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုယခုစုဆောင်းရန်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် CBD အစွမ်းသတ္တိ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အသွင်အပြင်နှင့် သက်ရောက်မှုများအတွက် ထုတ်ကုန်များကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကုမ္ပဏီများကိုသာ ထည့်သွင်းပြီး ပြင်ပမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။
101CBD လျှော်ပင်တစ်ခုလုံးကို သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေတွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် လူများကို ဟန်ချက်ညီအောင်ရှာဖွေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကို ပံ့ပိုးပေးကာ ကျန်းမာသောဘဝရရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 101CBD သည် သင့်ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော ထုတ်ကုန်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။ “ကျန်းမာရေး လမ်းမကြီး”။
ကုန်ကြမ်း ကယ်ဆယ်ရေး CBD လိမ်းဆေး
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Shea Butter၊ Vitamin E Oil၊ Mango Butter၊ Raw Hemp-Drived CBD၊ Hemp Seed Oil၊ Jojoba Oil၊ Mint Extract၊ Menthol၊ Eucalyptus Oil နှင့် Lavender Oil။
ခွန်အား - 250mg/500mg
စျေးနှုန်း - $ 47- $ 77
အမှီအခိုကင်းသော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ - ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရနိုင်သည်။
101CBD အစိမ်းလိုက် သက်သာဆေးရည်
အဆိုပါ ကုန်ကြမ်း ကယ်ဆယ်ရေး CBD လိမ်းဆေး အနံ့အသက်ကောင်းပြီး အသားအရေကို ပိုကောင်းစေတယ်။ အော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသော၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားထားသောအကောင်းဆုံး CBD လိမ်းဆေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုပြီးရင် အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေမှာပါ။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အအေးခံမှုကို ခံစားရစေရန် ထုတ်ကုန်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသောအခါတွင် အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ရရှိထားကြောင်း မှတ်သားထားရပါမည်။
2017 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, JustCBD cannabidiol ၏စစ်မှန်သောအလားအလာကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်တာဝန်ရှိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် ၎င်း၏ခါးပတ်အောက်တွင် ထုတ်ကုန်များစွာရှိပြီး ၎င်းတို့အသုံးပြုသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောအချက်အလက်များကို မည်သည့်အခါမျှ မပေးကြောင်း ကတိပြုပါသည်။ ထို့အပြင် JustCBD သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများပါ၀င်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှော်ပင်သည် USA မွေးမြူရေးခြံများမှ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး 100% အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
CBD လိမ်းဆေး Roll-On ခရင်မ် အေးခဲနာကျင်မှု
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - CBD၊ ရေ၊ သဘာဝ Menthol 3.9%၊ အရွက်ထုတ်ယူမှု၊ ရေဓာတ်ပါသော ဆီလီကာ၊ Boswella Serrata Extract
စျေးနှုန်း - ၂၄.၄၉ ဒေါ်လာ
အဆိုပါ CBD လည်ပတ်မှု JustCBD သည် ကျစ်လျစ်ပြီး နေရာတိုင်းတွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ Package သည် သင့်ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် အိတ်ကပ်ထဲထည့်ရန် လုံလောက်သောသေးငယ်သောကြောင့် သင်တစ်နေ့တာလုံး နာကျင်မှုမရှိဘဲ ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Roll-on သည် အေးမြသောခံစားမှုကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်ကာ ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေပြီး သွေးများ စီးဆင်းစေသည်။ ထူးခြားပြီး vegan ဖော်မြူလာက သင့်ကို လန်းဆန်းစေပြီး အသစ်ဖြစ်စေမှာပါ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နှင့် လည်ပင်းနာခြင်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
တစ်ဝက်နေ့ CBD ပိုင်ရှင်များသည် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန် သဘာဝဆေးတစ်လက်ကို ရှာဖွေလိုသောအခါ 2018 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Illinois တွင် ရုံးချုပ်၊ နေ့တစ်ဝက် CBD သည် Kentucky နှင့် Illinois တွင် စိုက်ပျိုးထားသော စက်မှုလျှော်ပင်ကို အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် မိသားစုပိုင်ကုမ္ပဏီသည် မျိုးစေ့မှရောင်းချခြင်းအထိ ထုတ်လုပ်မှုကို လိုက်လုပ်ကာ ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်များကို သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းနိုင်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ half Day သည် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိပြီး ၎င်းတို့၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ပြင်ပမှရလဒ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - CBD၊ Arnica၊ Shea Butter၊ Lavender၊ Eucalyptus၊ Beeswax
ခွန်အား - 500 မီလီဂရမ်
ဈေးနှုန်း – $29.99
အမှီအခိုကင်းသော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ — ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရနိုင်ပါသည်။
ဝက်နေ့ CBD Salve
အဆိုပါ နေ့တစ်ဝက် CBD ဖျော်ရည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး စွယ်စုံရထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင် အနံ့ရပြီး လိမ်းလိုက်တာနဲ့ အဆီမပြန်ပါဘူး။ ၎င်းကို full-spectrum hemp extract ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး shea butter နှင့် beeswax တို့ဖြင့် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေသည့်အပြင် နက်နဲသောရေဓာတ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော Essential oil များစွာလည်း ပါဝင်သည်။ ခါးနာခြင်း နှင့် အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲခြင်း များအတွက် ကောင်းမွန်ပြီး နေလောင်ခြင်း အတွက် အံ့ဩစရာ ကောင်းပါသည်။
တန်ခိုးကြီးသော အစိမ်းရောင် ယူကေအခြေစိုက် CBD ကုမ္ပဏီသည် အဆုံးစွန်သော ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြေလျော့စေမည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင်များက ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းတို့သည် နာကျင်မှုကို အမြန်သက်သာစေရန် အစွမ်းထက်သောဆေးများကို ထုပ်ပိုးထားသည်။ CBD ၏အကျိုးကျေးဇူးများအားဖြင့်လူများ၏ဘဝတွင်အမှန်တကယ်ကွာခြားချက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဆပ်ပြာမှသည် အနှိပ်ဆီများအထိ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို အမျိုးမျိုးပေးသည်။
CBD နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် Tiger Muscle Balm300MG CBD
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - လျှော်စေ့ဆီ၊ ရှယ်ယာထောပတ်၊ ပျားဖယောင်း၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကလိုရိုက်အမှုန်အမွှားများ၊ ရေ၊ ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် CBD ပေါင်းခံဆီ၊ ပရုတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ
ခွန်အား - 300 မီလီဂရမ်
စျေးနှုန်း – £35
အဆိုပါ Muscle Balm 100% သဘာဝဆေးရည်သည် နာကျင်မှုကို အမြန်သက်သာစေသည်။ ယူကလစ်နှင့် menthol တို့ဖြင့် ကြွယ်ဝသော ဆားရွက်သည် အေးမြသော အာနိသင်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ အဆီပြန်ခြင်းမရှိ၊ အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး အသားအရေကို နူးညံ့စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး၊ နာကျင်သောနေရာများကို ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
Metolius Hemp CBD နှင့် CBG လျှော်ပင်များကို အော်ဂဲနစ်နှင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် နာမည်ကြီး လျှော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွမှုမရှိသော်လည်း စျေးကွက်တွင်တွေ့ရသည့် အခြားအရာများထက် ပိုမိုထိရောက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးကို ကမ်းလှမ်းရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဆေးပြင်းလိပ်မှသည် ဆေးရည်တစ်မျိုးအထိ၊ ကုမ္ပဏီတွင် လူတိုင်းအတွက် တစ်ခုခုရှိသည်။
Metolius မြစ် CBD နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် နှုတ်ခမ်းအိတ်များ
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် သဘာဝအရသာ
ခွန်အား - အိတ်တိုင်းတွင် 100mg CBD
ဈေးနှုန်း – $19.95
Metolius ၏မြစ်ရေကျဆင်းခြင်း။ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော နှုတ်ခမ်းအိတ်များသည် စျေးကွက်တွင် အဆန်းသစ်ဆုံး CBD ထုတ်ကုန်ဟု ငြင်းခုံကြသည်။ အသုံးပြုရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းအိတ်တွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ မယုံနိုင်လောက်အောင် အကျိုးပြုပါတယ်။ အိတ်တစ်ခုစီတွင် တည်ငြိမ်အေးဆေးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် အော်ဂဲနစ် CBD အထီးကျန်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် 100mg ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို သင့်နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားသင့်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း သက်သာရာရလာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ချယ်ရီ နှင့် လိမ္မော် အရသာများဖြင့် ရနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ အရသာက လုံးဝ သဘာဝပါ။ အော်ဂဲနစ် stevia အရွက်ထုတ်ယူမှုများမှလာသည်။
စက်ဝိုင်းအပြည့် လျှော်ပင် turnkey CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ "မေတ္တာတရားနှင့် (ကရုဏာ) မေတ္တာတရားတို့ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်များသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ သမာဓိနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုတို့ဖြစ်သည်။" ကုမ္ပဏီသည် တစ်သမတ်တည်းရလဒ်များရရှိသည့် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့် သင့်ထံသို့ ထိပ်တန်းအရည်အသွေး၊ အော်ဂဲနစ် CBD ကို ယူဆောင်လာသည်။ Full Circle Hemp ၏ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု အပိုင်းသည် အရေပြားကို အကျိုးပြုသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အဆီများနှင့် ထောပတ်တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သည်။
CBD Topical Recovery Balm
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Arnica၊ Andiroba ဆီ၊ Kombo ထောပတ်၊ Capaiba Balsam၊ နနွင်း၊ ဂျင်း၊ Cannabis Sativa L အစေ့ဆီ။
ခွန်အား - 1,000 မီလီဂရမ်
စျေးနှုန်း – ယူရို ၄၉.၉၉ (ဒေါ်လာ ၆၀ ခန့်)
လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှု ရလဒ်များ - ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရနိုင်သည်။
စက်ဝိုင်းအပြည့် လျှော်ပင် Recovery Balm
အဆိုပါ Full Circle Hemp recovery balm Anti-inflammatory ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပေါများသည်။ ၎င်းတွင် 1,000 မီလီဂရမ် CBD ပါ၀င်ပြီး အထူးသဖြင့် ကြံ့ခိုင်မှုလွန်ရောဂါအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဗာလစံစေးဖြစ်သည်။ အနာရှိသောနေရာကို လိမ်းပေးသောအခါတွင် ဒဏ်ရာရသောနေရာကို အပူပေးပြီး သွေးကြောမျှင်များကို ပွင့်စေပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကို တိုးစေသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။ CBD ဗာလစံစေးသည် ရက်ရောသောအထုပ် 60 ml ဖြင့်လာသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ texture သည်ပိုးသား-ချောမွေ့ပြီး၎င်းသည်အသားအရေကိုကောင်းမွန်စေသည်။
PureKana Kentucky တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ရိတ်သိမ်းထားသော အော်ဂဲနစ် လျှော်ပင်ကို အသုံးပြုသည့် ပရီမီယံ CBD အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စမ်းသပ်ထားသည့် GMO မဟုတ်သော နှင့် vegan ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ဓာတုကင်းလွတ် CO2 ထုတ်ယူမှုကို အသုံးပြုသည်။ PureKana ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို ကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးနှင့် တတ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်များသည် သင့်အား CBD အမာခံပရိသတ်ဖြစ်စေရန် ချည်နှောင်ထားသည်။
CBD လိမ်းဆေး ခရင်မ်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ရေ၊ Squalane၊ Glycerin၊ Glyceral Stearate၊ Cannabis Sativa Seed Oil။
ခွန်အား - 1,500mg CBD
စျေးနှုန်း - $ 129
PureKana CBD လိမ်းဆေး ခရင်မ်
အဆိုပါ PureKana လိမ်းဆေးခရင်မ် နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းတွင် 1,500mg CBD ပါ၀င်ပြီး တက်ကြွသောခံစားမှုကိုပေးစွမ်းရန် menthol နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်ခဲ့တာက ခရင်မ်ရဲ့ texture ပါ။ ထုတ်ကုန်သည် ရေအခြေခံဖြစ်ပြီး လိမ်းရလွယ်ကူသည်။ ဒါ့အပြင် အဆီပြန်ခြင်းကိုလည်း မကျန်စေပါဘူး။ ထို့အပြင်၊ ဤ CBD ခရင်မ်သည် သက်သာစေသော ခံစားမှုနှင့် ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အသားအရေကို အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး ချောမွေ့တောက်ပစေပါသည်။
ကျန်းမာသောအမြစ်များ CBD လုပ်ငန်းတွင် ထူထောင်ထားသော နာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် မတူကွဲပြားသော ထုတ်ယူမှုနည်းလမ်းနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် မူပိုင်ခွင့်ကို မကြာသေးမီက ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ "ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို မထည့်ဘဲ အရည်အသွေးမြင့် အရသာရှိသော ဖျော်ရည်ကို ပေးသည်", ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်ထုတ်ပြ။ ထို့ထက်မက၊ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပရီမီယံအရည်အသွေးထက် တိုတောင်းသောအရာမရှိကြောင်း သေချာစေရန် အသေးစားအသုတ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကို ခွင့်ပြုထားသည်။
Root Butter CBD လိမ်းဆေး ကြွက်သားပွတ်ခြင်း။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Mango Butter, Coconut Oil, Shea Butter, Jojoba Oil, Vitamin E, Almond Oil, Lavender Essential Oil, နှင့် Full Spectrum CBD ရေနံ.
စျေးနှုန်း - $ 44
ကျန်းမာသောအမြစ်များ CBD Root ထောပတ်
အဆိုပါ Root ထောပတ် သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် 500 mg full-spectrum CBD ဆီမှပြုလုပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်တွင် လာဗင်ဒါနှင့် နှင်းဆီမာရီတို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေသည့်အပြင် ပြေလျော့စေပါသည်။ CBD ထောပတ်သည် လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အေးခဲသော ခံစားမှုတို့ကို မပေးဆောင်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသည်။ ဒါ့အပြင် ခါးနာခြင်းနဲ့ လည်ပင်းနဲ့ ပခုံးမအီမသာဖြစ်ခြင်းတွေအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် အနံ့မွှေးပြီး ပေါ့ပါးသော texture ရှိသည်။
လျှော်ကိုချစ် သဘာဝ ဖြည့်စွက်စာများကို လှည့်စားခဲ့သော ကျောင်းဟောင်း သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Tony Calamita နှင့် Tom Rowland တို့က 2015 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် Love Hemp ကို တည်ထောင်ကာ သန့်ရှင်းသော အရည်အသွေးမြင့် နှင့် ကွဲပြားသော CBD ထုတ်ကုန်များကို ကမ်းလှမ်းရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် CBD လုပ်ငန်းတွင် စံနှုန်းများ ကင်းမဲ့နေကြောင်း လျင်မြန်စွာ သိရှိလာသည်။
Hemp CBD Infused Body Salve ကို ချစ်ပါ။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ — အော်ဂဲနစ်အုန်းဆီ၊ အော်ဂဲနစ်ပျားဖယောင်း၊ အော်ဂဲနစ် အာဂန်ဆီ၊ အော်ဂဲနစ်နှင်းဆီဟိုင်းဆီ၊ အော်ဂဲနစ် Geranium ဆီ၊ ယူကလစ်ဆီမရှိမဖြစ်ဆီ၊
ဈေးနှုန်း – £19.99
အဆိုပါ Love Hemp ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကယ်တင်ခြင်း။ လက်ဖြင့်ရောစပ်ပြီး အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး CBD ၏ 300mg ကြွယ်ဝသည်။ ဆားရည်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် ပျားဖယောင်းတို့ပါ၀င်သော အုန်းဆီကြမ်းတစ်ခုပါရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ခြောက်သွေ့ပြီး ယားယံတဲ့အသားအရေတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာရည်သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော 50ml ဘူးထဲတွင် ပါရှိပါသည်။ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အထူလိုက်လျောညီထွေရှိသော်လည်း စုပ်ယူရလွယ်ကူသည်။. ဗာလစံဆီသည် နက်ရှိုင်းသော အေးမြမှုကို ပေးစွမ်းပြီး အသားအရေကို နူးညံ့တောက်ပြောင်စေသည်။
စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အလုံးစုံ သုခကို မြှင့်တင်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြောင်း၊ လယ်သမားနှင့် ဓာတုဗေဒပညာရှင် အရည်အသွေးမြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် သင့်အား CBD နှင့် ပတ်သက်သည့် သင့်မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနိုင်သည့် ဆေးဝါးပညာရှင်များထံ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်ကို ဘယ်အရာက ထူးခြားစေသလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်က သူတို့ရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ "ထုတ်ကုန်သည် လူနာများအား မှန်ကန်သော CBD ကုသမှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိစေရန် သေချာစေရန် ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး စုစည်းထားသော ဖော်မြူလာကို ထုတ်ပေးပါသည်။"
Roll-On ဂျယ်များ — Hot Spot & Chill Out
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ကျယ်ပြန့်သော Spectrum လျှော်ဆီ၊ ရေ၊ Glycerin
ခွန်အား - 150 မီလီဂရမ်
စျေးနှုန်း - $ 27.99
လယ်သမားနှင့် ဓာတုဗေဒပညာရှင် Hot spot နှင့် အပန်းဖြေ ဂျယ်လ်
ကြွက်သားများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း နှင့် တင်းမာမှုများကို သက်သာစေရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ Hot spot နှင့် အပန်းဖြေ gels များသည် အဆင်ပြေသော roll-on ထုပ်ပိုးမှုဖြင့် ပါ၀င်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို နေရာတိုင်းတွင် လိမ်းနိုင်ပါသည်။ ရောင်ရမ်းမှုဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများက အရေပြားကို နုပျိုစေပြီး ငြိမ်သက်သောခံစားမှုကို ပေးစွမ်းပြီး နာကျင်မှုကို ချက်ချင်းနီးပါး သက်သာစေသည်။ အအေးခံတာကို ပိုကြိုက်ရင် အပူပေးလိမ်းဆေး ဒါမှမဟုတ် Chill Out ကြိုက်ရင် Hot Spot ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကို စမ်းသပ်ကြည့်သောအခါ ၎င်းတို့သည် အညီအမျှ ကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်ကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီတော့ အဲဒါက မင်းရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပါပဲ။
Leafwell ရုက္ခဗေဒ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒ သိပ္ပံပညာကို အသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီသည် မိမိကိုယ်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု စံနှုန်းများကို အဆင့်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစေမည့် သန့်ရှင်းသော အညွှန်းကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဒါဆို အမှတ်တံဆိပ်ကို ဘာက ထူးခြားစေတာလဲ။ ဤသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်က ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေထားသည်- "ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ ၎င်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခင်ရသူများ၏ဘဝများကို သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများနေ့စဉ်စားသုံးသော ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။"
Hemp Extract Body Cream
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Broad Spectrum Hemp Extract၊ Shea Butter၊ Sweet Almond Oil၊ Mango Seed Butter၊ Jojoba Seed Oil၊ Arnica Montana ပန်းဆီ၊ Lemongrass ဆီ၊ Chamomile ဆီ။
စျေးနှုန်း - $ 31.99
Leafwell ရုက္ခဗေဒ Hemp Extract Body Cream
အဲဒါကို ပြောရမယ်။ Lefwell ၏ခန္ဓာကိုယ်ခရင်မ် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားထားသော အကောင်းဆုံး CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသားအရေကို ကောင်းမွန်စေပြီး သိသိသာသာ ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသော ကောက်နှုတ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်သည် သင့်ကိုယ်သင် ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းသင့်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းပြီး ပေါ့ပါးသော CBD ထောပတ်သည် arnica ကဲ့သို့ အနံ့ရှိပြီး အလုံးစုံ သက်သာစေသော အတွေ့အကြုံကို ရရှိစေပါသည်။
OnMi Patch ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Transdermal patches များသည် အရေပြားပေါ်တွင် စုပ်ယူထားသော သဘာဝအတိုင်း ရရှိထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အမှန်တကယ် ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤဖာထေးမှုများတွင် သမားရိုးကျဆေးပြားများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော အဖြည့်ခံပစ္စည်းများ မပါဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤခေတ်မီဆန်းသစ်သောပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကို စမ်းသုံးကြည့်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေပြီး ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါက သင့်အတွက် စမ်းသပ်လိုပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၊ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သည့် ဖာထေးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအမြင်အားလုံးကို သိရှိနိုင်ရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
CBD နှင့်အတူ OnMi Relax Patch
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - Passionflower၊ valerian၊ ဗီတာမင် B1
ခွန်အား - 30 မီလီဂရမ်
စျေးနှုန်း – $5.00 – $42.00
သင်ဟာ ဖိအားများစွာနဲ့ အဆက်မပြတ် ဖိစီးခံနေရသလို ခံစားရရင်၊ အနားယူဖာထေးပါ။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Relax patch ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းတွင် အိပ်ပျော်ခြင်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စိုးရိမ်သောကလက္ခဏာများ သက်သာရာရစေရန် လုပ်ဆောင်သည့် passionflower ပါဝင်ပါသည်။ ထို့နောက် စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေပျောက်စေသော အစွမ်းထက်သော ရုက္ခဗေဒပစ္စည်းဖြစ်သော valerian ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ Relax patch တွင် ဗီတာမင် B1 ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း လူသိများသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ဆဲလ်များသည် အစာကို စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကူညီပေးသည်။.
SunMed ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ စိန့်ပီတာစဘတ်အခြေစိုက် နာမည်ကြီး CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Rachel နှင့် Marcus Quinn တို့မှ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Rachel's Chron's disease အတွက် အထောက်အကူတစ်ခုအဖြစ် CBD ရေနံ၏အံ့ဖွယ်များကို အသုံးချခဲ့သည်။ ပထမဆုံး "You CBD Store" ကို 2018 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး US တစ်ဝှမ်းတွင် ရာနှင့်ချီသော franchise တည်နေရာများ ပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
SunMed လိမ်းဆေး CBD ခရင်မ်
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - ငရုတ်ကောင်းဆီ
ခွန်အား – 500/1,000/2,000mg
စျေးနှုန်း - $50 မှစတင်သည်။
အဆိုပါ SunMed CBD ခရင်မ် 2019 USA CBD Expo Award ကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစားတွင် ရရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို စမ်းသုံးကြည့်ရန် ပီတိဖြစ်ရပါသည်။ နောက်ပြီးတော့ စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရမယ်။ အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး၊ phytocannabinoid ကြွယ်ဝသော လျှော်ပင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် လိမ်းဆေးခရင်မ်သည် CBN၊ CBC၊ နှင့် CBG တို့အပြင် terpenes၊ flavonoids နှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်များအပါအဝင် အကျိုးပြု cannabinoids များ၏ အစွမ်းထက်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် လိုအပ်သလို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုပါ။ ထိခိုက်သောဧရိယာပေါ်တွင်။ ပေါ့ပါးသော ဖော်မြူလာကြောင့် သင်သည် အနည်းငယ်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
Wellphoria အလှအပ ဆံပင်နှင့် အရေပြား ထုတ်ကုန်များတွင် CBD အသုံးပြုမှုကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည့် USA အခြေစိုက် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးသည် vegan ဖြစ်ပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများတွင် စမ်းသပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် 99% သန့်စင်သော CBD နှင့် လျှော်စေ့ဆီတို့၏ ဆန်းသစ်သောပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အာဟာရကြွယ်ဝသောဖော်မြူလာကို ပေးဆောင်ကာ အလွန်ကောင်းမွန်သောစောင့်ရှောက်မှုပေးသည်။
Wellphoria CBD-ထည့်သွင်းထားသော လက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အာဟာရဖြစ်စေသော Lotion
CBD-ထည့်သွင်းထားသော လက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အာဟာရဖြစ်စေသော Lotion
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - CBD နှင့် Hemp Seed Oil၊ Glycerin၊ Shea Butter၊ Squalane၊ Limonene။
စျေးနှုန်း - $ 24
အမှီအခိုကင်းသော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ - ဟုတ်တယ်
အဆိုပါ လက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အာဟာရဖြစ်စေသော ဆေးရည် Wellphoria သည် သင့်တွင် ခြောက်သွေ့သော အသားအရေရှိပါက သင်လိုအပ်သောအရာသာဖြစ်သည်။ ပေါ့ပါးသော texture နှင့် pump ပါသော အဆင်ပြေသည့် ပက်ကေ့ခ်ျပါရှိသော ဤထုတ်ကုန်သည် သင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုဂိမ်းတွင် လျင်မြန်စွာ အဓိကဖြစ်လာပါမည်။ CBD lotion သည် အရေပြားအတွင်း လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး အရေပြားကို ချက်ချင်း အစိုဓာတ်ပေးသည်။ ရောင်ရမ်းနေတဲ့ အသားအရေကို တည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆံပင်ရိတ်ပြီးနောက် အရေပြားကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ Wellphoria CBD-ထည့်သွင်းထားသောဆေးရည်သည် စေးပျစ်သောအကြွင်းအကျန်ကို မထားခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်၊ အနံ့သည် လန်းဆန်းပြီး သန့်ရှင်းသော်လည်း မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ။
Jihi ကပ်ရောဂါကြားတွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့သည် ၎င်းသည် မြင့်မားသောကိုယ်ကိုတိုင်ပြုစုခြင်းထုတ်ကုန်များဖြင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် သင့်တော်သောအချိန်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဆေးခြောက်ကမ္ဘာမှာ အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံး ကြိုးပမ်းမှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ 2013 ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့သည် ထုတ်လုပ်သူများ၊ စိုက်ပျိုးသူများနှင့် လက်လီရောင်းချသူများ ချိတ်ဆက်သည့် အကြီးဆုံး လက်ကားစျေးကွက်ဖြစ်သည့် Cannabase ကို စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကင်းစင်ကာ သန့်ရှင်းပြီး လျှော်ပင်၏ ကုစားနိုင်သော စွမ်းအားများကို အရင်းအနှီးအသုံးချသည့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး သတိထားရမည့် ထုတ်ကုန်လိုင်းကို ဖန်တီးရန် ဤအတွေ့အကြုံကို အသုံးချခဲ့သည်။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - Arnica၊ Argan Oil၊ Menthol၊ Jojoba Oil
ဈေးနှုန်း – $50
ချမ်းသာပြီး စိတ်ကို ချမ်းသာစေသည် Jihi ၏ body balm ကြွက်သားနှင့် အဆစ်များ သက်သာလာစေရန် အော်ဂဲနစ် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဗာလစံစေးအခြေခံသည် 500mg CBD isolate နှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့် အာဟာရဖြစ်စေရန်အတွက် အဆီ 19 ခုရှိသည်။ Merriment ၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းမှာ အိုမီဂါဖက်တီးအက်ဆစ်ကြွယ်ဝသော Camellia အစေ့ဆီဖြစ်သည်။ ရုံးအလုပ်တွေလုပ်နေတော့ လည်ပင်းနဲ့ ခါးတွေ ဆက်တိုက်နာတယ်။ ဒီတော့၊ ငါပျော်ခဲ့တယ် ရောက်လာတဲ့ အထုပ်မှာ ဒီလို အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းနဲ့ ဒီဗာလစံဆီ ပါ၀င်လာတဲ့အခါ။ မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်းတွေမှာ ကျောအောက်ပိုင်း၊ လည်ပင်းနောက်ကျောနဲ့ ပခုံးတွေမှာ စပြီး လိမ်းပါတယ်။
သန့်ရှင်းသော သဘာဝ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ Amsterdam တွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိသော CBD အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ CBD နှင့် လျှော်ပင်၏ အခြားသော အရည်အသွေးမြင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီသည် မျိုးဆက်သစ် ကျန်းမာရေး ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့် အမြင့်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို သေချာစေသည့် ထူးခြားဆန်းသစ်သော အအေးခံနည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားသည်။ Solvents များသည် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မပါဝင်ပါ — ရေနှင့် ဖိအားမျှသာ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ လျှော်ပင်ကို ဓာတုဗေဒအရည်ပျော်ဆေးများမသုံးဘဲ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ညှစ်သည်။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ — Shea Butter, Coconut Oil, Jojoba Oil, Chamomile Tea Oil
ဈေးနှုန်း – £34.99
အဆိုပါ Pure Natur Skin Restoring Cream ပကတိကျောက်မျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ထုပ်ပိုးတာကို အရင်သဘောကျသွားတယ်။ 100% သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီး အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ခရင်မ်သည် မတူညီသော အရေပြားပြဿနာများကို ကုသရန် ရည်ရွယ်သည်။ ယားယံခြင်း၊ ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသော အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသည်။ အလွှာငယ်တစ်ခုဖြင့် စတင်နိုင်ပြီး သင်အလိုရှိသလောက် မကြာခဏ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဟိ texture သည် ချောမွေ့သည်။ ဘောနပ်စ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ချောဆီအကြွင်းအကျန်များကို မချန်ထားပါ။ ဒီခရင်မ်က သင့်အသားအရေကို နုပျိုစေရုံသာမက နူးညံ့ချောမွေ့စေမှာပါ။ အားလုံးရဲ့ထိပ်မှာ အနံ့က အရမ်းမိုက်တယ်။
မင်္ဂလာပါ Degelis Tufts Pilla မှ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Degelis သည် သူမ၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို မထိခိုက်စေသော သန့်ရှင်းသော CBD vapes များထုတ်လုပ်ရန် စတင်စဉ်းစားလာခဲ့သည်။ သူမသည် လယ်သမားများ၊ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များ၊ ထုတ်ယူသူများနှင့် လက်တွဲပြီး သဘာဝအတိုင်း၊ မူပိုင် vape oil formula ကို ဖန်တီးသည်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုကင်းစင်သော vape ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင် ထင်ရှားသောဆိုင်ခွဲများတွင် TribeTokes အပါအဝင် 2019 ခုနှစ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်သည် ထင်ရှားလာပါသည်။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - Arnica၊ Jojoba၊ Wild Marjoram နှင့် Aloe
ဈေးနှုန်း – $60
TribeRevive ၏နာကျင်မှုခရင်မ် နာတာရှည် ဝေဒနာရှိသူများကို သဘာဝအတိုင်း ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် OTC ဆေးများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ ဤအကိုက်အခဲပျောက်ခရင်မ်ကို အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ပခုံးနာခြင်း၊ နှင့် carpal ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသာမက ဒဏ်ရာများနှင့် တင်းမာမှုများကိုပါ ကုသရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခရင်မ်သည် ပိုးဝင်သော texture ရှိပြီး အလွယ်တကူ လိမ်းနိုင်သည်။2အောင်စ ဗူးထုပ်က သုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ နင်က နာတာရှည်နာကျင်မှုများအတွက် ခရင်မ်ကို အသုံးပြုပါ။မိနစ် 30 မှ တစ်နာရီခြားတိုင်း လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
MelonCBD ထူးခြားသော CBD အမှတ်တံဆိပ်မစ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည် "လျှော်ပင်အမည်းစက်ကိုရုတ်သိမ်းပါ။"နောက်ထပ် CBD ထုတ်ကုန်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်။ ထုတ်ကုန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုလုံးသည် THC ကင်းစင်ပြီး ပြင်ပကုမ္ပဏီဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စမ်းသပ်ထားသည်။ Melon ၏ အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးနှင့်အတူ လိုအပ်သည့်အခါတွင် သင်၏နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုကို ကြွယ်ဝစေပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင် ထိုအပိုပံ့ပိုးမှုကို ရယူနိုင်သည်။ CBD gummiesအဆီများ နှင့် လိမ်းဆေးများ။
Emu ဆီဖြင့် ဖရဲသီး CBD လိမ်းဆေး အထူးကြပ်မတ်သက်သာဆေး
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Aqua၊ Emu ဆီ၊ အရက်သေစာ၊ Stearic Acid၊ Menthol၊ Glycerin၊ Squalane၊ Hemp မှရရှိသော CBD
စျေးနှုန်း - $ 34.99
Melon CBD မှ သက်သာသော ပွတ်တိုက်မှုကို EMU အဆီဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး လျင်မြန်သော ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ထူးခြားသော ဖော်မြူလာကို ပေးသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် အလွန်ရေစိုသောကြောင့် နာကျင်မှုကို ချက်ချင်းသက်သာစေရန် ထုတ်ကုန်များစွာမလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ လေမ၀င်သောပန့်ပါသော အထုပ်သည် လွယ်ကူစွာ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအရ၊ ထုတ်ကုန်များသည် ခါးနာခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့် လည်ပင်းနာခြင်းများအတွက် အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။
2015 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, စက်ဝိုင်းအပြည့် လျှော်ပင် ခိုင်မာမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ The Hemp Federation Ireland ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော Full Circle သည် သင်ယုံကြည်နိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုလုံးကို ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ပြီး ISO90001 လက်မှတ်ရထားသည်။ Full Circle Hemp ကိုယ်စားလှယ်၏အဆိုအရ၊ ကုမ္ပဏီ၏အမှတ်အသားဖြစ်သော CBD ဆီသည် ကျဆင်းသွားသည်အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံး ပရီမီယံ လျှော်ပင်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ cannabinoids၊ CBDa၊ terpenes နှင့် လျှော်ပင်၏ အခြားသော အကျိုးပြုဒြပ်ပေါင်းများစွာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။" ထို့အပြင်၊ အဆီအစက်များကို MCT နှင့်ရောစပ်ထားပြီး vegan နှင့် gluten-free များဖြစ်သည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ကြက်ဆူစေ့ဆီ၊ Andiroba စေ့ဆီ; Jojoba အစေ့ဆီ၊ Calendula ပန်းထုတ်ယူ၊ Rosemary အရွက်ဆီ။
ခွန်အား - 1,000mg/30ml
သီးခြားဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ - ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရနိုင်သည်။
သက်သတ်လွတ် - ဟုတ်တယ်
စက်ဝိုင်းအပြည့် လျှော်ပင် ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြားဆီ
အဆိုပါ ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြား CBD ဆီ သင့်ဆံကေသာအတွက် သင့်လျော်သော အဆီများနှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါသည်။ အဆီဖော်မြူလာတွင် ကြက်ဆူဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ဂျိုဂျိုဘာ၊ နှင်းဆီမာရီနှင့် လာဗင်ဒါတို့ ပါဝင်သည်။ အစိုဓာတ်ရရှိရန် ဦးရေပြားသို့ အဆီအနည်းငယ်ကို နှိပ်နယ်ပေးရပါမည်။ နှစ်ပတ်ကြာ ဆက်တိုက်အသုံးပြုပြီးနောက်၊ အဆီသည် သဘာဝအဆီပမာဏကို လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ကို သတိပြုမိပြီး ဗောက်များကို လျော့ပါးစေပါသည်။ CBD ဆံပင်အဆီများသည် ဦးရေပြားကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ၎င်းတို့၏ ပိုးသတ်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လည်း လူသိများသည်။ ဒါ့အပြင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး ဆံသားကြီးထွားမှုကို ဆွဲဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆီဟာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
FoCo အော်ဂဲနစ် ဖောက်သည်များ စိတ်ထဲရှိ ကျန်းမာရေးကို ပြန်လည် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် လယ်ယာမှ စင်အထိ 100% ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းက ကော်လိုရာဒိုတွင် စိုက်ပျိုးထားသော၊ အော်ဂဲနစ်နှင့် GMO ကင်းစင်သော လျှော်ပင်ကို အသုံးပြု၍ ရလဒ်များကို မြန်ဆန်စွာပေးစွမ်းနိုင်သော အစွမ်းထက်သော ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးသည်။
ကယ်ဆယ်ရေး CBD Stick
ပါဝင်ပစ္စည်းများ — Virgin Shea Nut Butter, Copaiba Essential Oil, Hemp Extract, Camphor Essential Oil, Beeswax, Evening Primrose, Peppermint Essential Oil.
ခွန်အား - 600 မီလီဂရမ်
စျေးနှုန်း - $ 39
FoCo အော်ဂဲနစ် ကယ်ဆယ်ရေး CBD Stick
အဆိုပါ ကယ်ဆယ်ရေး CBD ချောင်း USDA အသိအမှတ်ပြု အော်ဂဲနစ် လျှော်ပင်ထုတ်ယူမှု အပြည့်အ၀ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး Copaiba၊ Peppermint၊ Camphor နှင့် Eucalyptus ကဲ့သို့သော ရောင်ရမ်းမှု သက်သာစေသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဆီများဖြင့် ကြွယ်ဝပါသည်။ ၎င်းသည် mint ၏အေးမြသောခံစားမှုကိုပေးစွမ်းပြီး နာကျင်မှုကို ချက်ချင်းနီးပါးသက်သာစေသည်။ ထုပ်ပိုးမှုက အရမ်းအဆင်ပြေပြီး ဘယ်နေရာမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Ojai စွမ်းအင် 100% အသိအမှတ်ပြု အော်ဂဲနစ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ထုတ်ကုန်များကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်ပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး CBD Public Benefit Corporation ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင် Will Kleidon သည် Cannabis လုပ်ငန်း၏ ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး CBD ကြွယ်ဝသော ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရာတွင် လူသိများသည်။
အပြည့်အဝ Spectrum CBD အားကစားဂျယ်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - CBD၊ Arnica၊ Calendula၊ Spilanthes၊ Rosemary၊ Ginger နှင့် Mint
ခွန်အား - 100 မီလီဂရမ်
ဈေးနှုန်း – $46.95
Ojai စွမ်းအင် Full-Spectrum CBD အားကစားဂျယ်
အဆိုပါ အားကစားဂျယ် လျှော်ပင်ထုတ်ယူမှုနှင့် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဓာတုပစ္စည်းများမပါဘဲ ထုတ်လုပ်သည့် တစ်ခုတည်းသော ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ရောင်စဉ်တန်းဂျယ်ဖြစ်သည်။ CBD ဂျယ်သည် လျင်မြန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အမြင့်ဆုံးစုပ်ယူမှုအတွက် ထူးခြားသောဖော်မြူလာသည် ဒြပ်ပေါင်းများကို သွေးကြောထဲသို့ အမြန်ဝင်ရောက်စေသောကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ချက်ချင်းခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
101CBD CBD အကြောင်းအရာ
FoCo Organics သက်သာရာရစေတယ်။
Full Circle Hemp ဆံပင်ဆီ
Full Circle Hemp recovery balm
Hal Day CBD ဖျော်ရည်
Healthy Roots အမြစ်ထောပတ်
JustCBD CBD အလှည့်အပြောင်း
Leafwell Botanicals hemp extract body cream
ဖရဲသီး CBD ပွတ်
PureKana လိမ်းဆေး CBD ခရင်မ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2021
Cerena အပြည့်အဝ CBD အမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
Metolius Hemp ကုမ္ပဏီ ထုတ်ကုန် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
FAB CBD သုံးသပ်ချက် 2022
စိမ်းလန်းသောလမ်းများ CBD ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။